Wareysi Wargeyska Jamhuuriya la yeeshay Wasiirka Degaanka iyo Horumarinta kuna saabsan xaalada Gobolka Sool | WWW.SOMALILAND.NO
Wareysi Wargeyska Jamhuuriya la yeeshay Wasiirka Degaanka iyo Horumarinta kuna saabsan xaalada Gobolka Sool
Posted on Febraayo 1, 2008 by Abdirisak Fadal
Hargeysa (somaliland.no)- Wasiirka Degaanka iyo Horumarinta Somaliland Md. Fu’aad Aadan Cadde, ayaa ka xog-warramay xaaladda nabadgelyo iyo isbeddelka waqtigan ee magaalada Laascaanood, kadib dagaalkii ciidammada Somaliland kula wareegeen maamulka Gobolka Sool.
Waraysi khaas ah oo uu wasiirku xafiiska shalay ku siiyey Jamhuuriya waxa uu kaga hadlay arrimo dhawr ah oo ay ka mid yihiin hawlaha taakulaynta gobollada bari, ololaha ictiraaf raadinta iyo safarkii u dambeeyey Madaxweyne Rayaale iyo weftigii uu hoggaaminayey ku tageen dalalka Itoobiya, Ingiriiska iyo Maraykanka.
Su’aalihii la weydiiyey Md. Fu’aad Aadan Cadde iyo jawaabihii uu ka bixiyey waxay u dhaceen sidan:
Su’aal: Wasiir; waxaad warbixin naga siisaa xaaladda ay ku sugan tahay waqtigan magaalada Laascaanood iyo isbeddelka ku yimi tan intii ay gacanta Somaliland soo gashay?
Jawaab: Gobolka ayey Somaliland si nabadgelyo ah ku tagtay, dagaal Somaliland ay kaga saartay Puntland oo weyni ma oolin, dagaal ka dhimasho iyo dhaawac yaraana ma jirin. Ilaahay baa mahad leh qoladii shishe ee Puntland way ka baxeen, Somaliland baa beddeshay, ilaa haddana waxa meesha [Laascaanood] iyadoo xafiisyadii dawladdu kuligood dumayaan.
Badhasaabku meesha wuu ka shaqeeyey, haddaad aragtaan Ilaahay baa yaab idiin keeni lahaa, gebigiisuba wuu soo dhacayey saldhiggii booliska ee wax lagu xidhayey, dhammaan goobihii adeegga dadweynuhu meesha wuu ka maqnaa, waxaas oo dhan dawladda Somaliland baa qandaraaska bixisay oo wax ka qabatay oo maanta dhul lagu shaqayn karo oo bilicdiisu wanaagsan tahay weeye. Waddadii oo hareeraha ka googo’day waa la samaynayaa oo hadda ayaa la wadaa, xaaladda Laascaanood-na waxay ku soo beegantay waqti kala-guur ah oo sannadkii hore dhammaaday, kan cusubna iminka bilaabmayo, waxana isbeddeshay oo dhalatay nabadgelyo, waxa dhacday in dadka mooralkoodii la dhisay, waxa dhalatay inaan kibir dadka lagu xidh-xidhin sifo sharciga waafaqsan mooyaane, waxana lagula dhaqmaa kolba dembiga uu galo qofku, sidoo kalena meeshaa [Laascaanood] lacagtii Somaliland baa ka dhalatay oo ka socota. Nimanka millateriga ah oo weligood cid ay waxtaraan mooyee qofka wax u geysan ayaa meesha jooga, iyagii baana dadka soo jiidanaya, ku talogalkooduna waxa weeye in aan dadka magaalada jooga cidna ka caban.
Waannu maqalnaa qolyahaa Puntland dagaal bay soo wadaan, way isa soo abaabulayaan, intii tamartayada ahna illeyn dad Soomaaliyeed baa isku dhimanayee waannu la hadlaynaa oo waxaannu ka baryaynaa inta hadhayna dadaal lagu dhammeeyo.
S: Hawlihii taakulayntu gobollada bari halkee ayey idiin marayaan?
J: Bisha February ee berri [maanta] bilaabmaysa waxaannu rajaynayaa in mashaariicdii dugsiyada iyo adeegyada bulshadu ay bilaabmaan, taakulayntuna way fiican tahay. Laba taakulaynood baa jira, mid waxa weeyaan mid reer Somaliland oo dhammi ururinayaan oo si fiican u socota oo uu guddoomiye ka yahay Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland, xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah iyo golayaasha kale ee qarankuna ay ku jiraan, taas oo gacmo nabadgelyo ah ku jirta, si wanaagsan baanay u socotaa. Ta kalena waxa weeye 2% (boqolkiiba laba) cashuurta la saaray oo waxkastoo Somaliland looga baahan yahay dulsaar ku yahay, haddaad guri iibsato waa lagaa qaadayaa, haddii aad gaadhi iibsatana waa la mid, lacag aad u badan weeyaan, waxaanan rajaynayaa in bisha February aynu ogaan doono bandhigeeda si aad iyo aad u fiican baanay u socotaa hawshaasi.
Madaxweynuhu wuxuu ballanqaaday inuu biyo macaan u samaynayo Laascaanood, haddii dadka biyo macaan loo sameeyana wax weyn baa loo qabtay.
S: Wasiir; maanta waxa ay Somaliland beesha ka sugaysaa waa ictiraaf caalami ah, markaad eegto safarkii Madaxweynaha, Sool oo gacanta Somaliland soo gashay iyo mowqifka dunida, markaa rajo intee le’eg ayaad ka qabtaa in Somaliland aqoonsi degdeg ah hesho?
J: Horta jaraa’idkeenna, warbaahinteenna iyo wararka dawladdaba kuli waad la socotaa, rajadeenuna maanta waa laba; marka hore in dalkii wax loo qabto oo xaggii horumarinta la innaga kaalmeeyo, taas ta ka weynina waa ictiraafka, idinmana odhanaya aqoonsigii gacanta ayaannu ku haynaa, laakiin iminka waxay maraysaa caalamka iyo meel kastaaba in arrinta Somaliland aanay ahayn wax indhaha laga qarsado. Xalay [habeen hore] Jendayi Frazer, Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka u qaabilsan Afrika wax fiican bay sheegtay, waxayna tidhi; “Koox xaqiiqo-raadin ah oo ka socota Midowga Afrika ha loo diro Somaliland.” Kooxdaas xaqiiqo-raadiska kadibna ay iyadu imanayso Somaliland, Kongarayska Maraykanka-na in qaddiyadeenna la hordhigo ayaa loo baahan yahay, Ra’iisal-wasaaraha Ingiriiska waad maqlayseen maalintii dhoweyd, shirka Midowga Afrika-na dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa ka socda, Wasiirrada Arrimaha Dibadda iyo Maaliyadda ee Somaliland ayaa ku sugan shirka Midowga Afrika, markaa labada dhinacba rajo aad u ballaadhan baannu qabnaa.
S: Waxa la yidhaahdaa haddii la samayn lahaa guddi ictiraaf-raadin ah oo ka kooban xukuumadda, axsaabta mucaaradka, Baarlamanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intaa wuu ka soo dhowaan lahaa qoonsiga Somaliland, bal arrintaa ka warran?
J: Way fiicnaan lahayd, laakiin kuligeen guddi baynu wada nahay, qof kasta oo reer Somaliland ah oo wax kala garanayaana ictiraaf buu raadinayaa, aqoonsigeenana waxa kow ka ah nabadda, in maamulku wada gaadho dalka oo dhan iyo in dhammaanba shacbigeenuna nabad ku wada noolaado, saddexdiiba hadda way inoo wanaagsan yihiin, ninkii kontiinar innagu xidhanayaana haddii aynu 18 sannadood sugaynay oo ay ka soo rayn wayday waxaan u malaynayaa in aan cid dambe kontiinarkaa suga innagu odhan doonin.
« Faalada Maanta:Mudane Axmed Moxamed Silanyo Halyeyga Somaliland Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Sabti, 2-feb.2008 »